UHENRY CAVILL UQHEKEZA UKUTHULA 'WITCHER' ENIKA IMPENDULO EFANELEKILEYO ETSHABALALISA INZONDO - IINKQUBO ZETV
Inkwenkwezi yeDCEU uHenry Cavill udlala indima ebalulekileyo kulungelelwaniso lweNetflix lukaWitcher. Ukudlala kwindawo yokuqala
Inkwenkwezi yeDCEU uHenry Cavill udlala indima ebalulekileyo kulungelelwaniso lweNetflix lukaWitcher. Ukuqala kwindima ephambili yeGeralt yaseRivia, umboniso weCavill uncediswa nguStephen Surjik ufumene uphononongo oluninzi. Kodwa, uninzi lwabagxeki abangavumelaniyo abathandwa luthotho lukaHenry Cavill.
Witcher ifumene uphononongo oluxubekileyo kubabukeli nabagxeki. Iitamatisi ezibolileyo zinemilinganiselo yokuvunywa engama-67% kunye nenqaku labaphulaphuli eliyi-92%. Oku kuyatyhila ukuba umboniso uphononongwe kakuhle kodwa bekusoloko kukho ukugxekwa okunye.
Ixesha leenkwenkwezi 2 isiqendu 5
Wenza ntoni uHenry Cavill ngokususa inzondo?
UHenry Cavill uyaphula ukuthula kwakhe kuphononongo lwentiyo kwiNetitcher yeNetflix. Usivula ngendlela achuma ngayo ekuphenduleni kwababukeli.
I-Cavill ingumntu othanda i-Witcher franchise. Njengokuba ethatha indima kaGeralt waseRivia kuthotho lweNetflix, wenza inqaku lokufunda uphononongo malunga nokusebenza kwakhe. Ukwanempendulo efanelekileyo kwabo bagxeka kakhulu ukusebenza kwakhe.
Jonga indlela awuphendule ngayo kulo mbandela:
Ndonwabile kakhulu ukuba abantu bathande umlinganiswa kakhulu. Ndiyazi ukuba kukho izimvo ezixubeneyo apha ngaphandle, endonwabileyo xa ndifunda nazo. Kum, kubalulekile ukuba uhambe malunga nokufunda-Ndikho kuzo zonke iiforamu zeReddit. Ndifunda lonke uphononongo. Ndizama ngokwenyani ukufumana ulwazi lomntu wonke. Ezinye aziloncedo, kwaye ezinye izigxeko ziluncedo olumangalisayo. Ndiyithatha yonke, kwaye ndikhangele phambili ukuyizisa ngokusondeleyo nakufutshane nokubhala kukaSapkowski.
UCavill ukwafuna ukucacisa ukuba yintoni eyenza isiphoso kwindawo yokujonga yabaphulaphuli. Ababukeli abanalo ukuqonda okufanayo kwi-franchise, kwaye bathambekele ekuhlukaniseni umlingiswa ukuze bayigxeke. Wongeza, ndicinga ukuba nakuphi na ukugxekwa, bahlala kwizinto ezifana nale bendisitsho - asinalo ithuba lencoko ende okanye incoko yababini noGeralt.
Kodwa uCavill uyayilungiselela into yokugxekwa. Wongeza athi
Ke mna, yeyokuba ndibone oko, ukuyiqonda, kwaye ndisebenze ngendlela endingawenza ngayo umsebenzi wam ngcono kwisakhelo esinikiweyo, [indlela] yokuxolisa nokwenza abo bantu bazive bekhululekile ukuba ndiyamqonda lo mlinganiswa - kwaye ndiyayithanda lento umlingiswa kanye njengokuba besenza.
Yiyo le nto eyenza uHenry Cavill abe yinkwenkwezi ye-iconic.
Ngaba iWitcher isizini 2 iphantsi kwemveliso?
Umbonisi we-Showrunner uLauren S Hissrich unika ubungqina bokuba uhlaziyo lwechungechunge lwexesha lesibini ngo-Novemba 13, 2019. Njengangoku, awukho umhla womoya ofumanekayo kwinkulumbuso yeWitcher yexesha lesibini.
Ubuso besiza se-mahou shoujo
Njengokuba uthotho lukhanyisiwe kwisizini yesibini, qaphela ukusebenza kukaHenry Cavill kwisizini yokuqala yeWitcher. Olu luluhlu lwee-epic zezilo, umlingo kunye nenkulumbuso ephambili yeNetflix.
Isiphelo se-anime uthotho ngokulandelelana
nini i-blindy blinders elandelayo
nini ixesha le-5 lokungabi nazintloni kwi-Netflix
Ngaba liza kubakho ixesha le-4 le-anne kunye no-e
izinto zasemzini zibonisa ezifanayo